Sheekh Shariif oo Kashifay Hawlaha Burburinta ah ee ay Xukuumada Eritrea ku Jirto – Rasaasa News
Sheekh Shariif oo Kashifay Hawlaha Burburinta ah ee ay Xukuumada Eritrea ku Jirto
Oct 3, 2009 Eritrea, Ogaden, somalia
Xukuumada Eritrea oo ah dalka ugu badan ee siiya Jabhada ku kacsan dawlahadooda saldhigyo, siisan tababaro si ay dagaalo uga ridaan dalalkooda. Xukuumada Eritrea ayaa waxaa saldhigyo ku leh 30 Jabhadood oo ka kala yimid dalalka geeska Afrika, Xukuumada Eritrea Jabhadaha jooga oo dhan waxaa ay ka amarka qaataan saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Eritrea.
Xukuumada Eritrea waxaa ay kala qaybisaa Jabhadaha dhexdooda iyada oo aan u ogolayn in Jabhaduhu ay kaligood tashadaan, ma jirto hal Jabhad oo ay Eritrea saldhig siisay oo ku guulaystay ujeedooyinkoodii ay xidhiidhka ula samaysteen xukuumada Eritrea.
Jabhadaha faraha badan ee ay xukuumada Eritrea saldhigyada siisay ayaa waxaa ka mid ahaa Jabhada ONLF oo iyadu ahayd Jabhadii ugu horeysay ee ay xukuumada Eritrea saldhig siisay si ay cadaadis ugu saarto xukuumada Ethiopia ee ay coloobeen.
Jabhada ONLF, waxaa ay xukuumada Eritrea u horseeday burbur, ka dib kolkii ay iska horkeentay masuuliyiinta Jabhada iyada qaarkood ka dhaadhicisay in ayna raacin sharciga ururka, waxayna heshiis khaas ah la yeelatay hogaankii hore ee ururka. Dhibaatooyin aan xad lahayn ayaa soo foodsaaray, ururka ONLF, wax ay u taro daayo waxay xukuumada Eritrea gaadhsiisay ururka ONLF heer uusan waligii oo dambe is aamini karin.
Jabhadihii ay saldhigyada siisay waxaa kale oo ka mid ahaa ururkii dib u xoreynta Somaliya, kaas oo kolkii uu arkay sida ay ula dhaqmayso Jabhadaha kale iyagu goostay in ay iskaga guuraan. Xubnihii ururka dib u xoreyntay Somaliya ee fahmay ujeedadda xun ee Eritrea waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Somali Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sheekh Shariif oo haatan booqasho ku jooga dalka Maraykanka ayaa waxaa uu khudbad dheer u jeediyey Jaaliyada Somalida ee degan dalka Maraykanka waxaana uu yidhi “Eritrea way na soo dhaweysay, waxaanse gadaal ka ogaanay in ayna wax wanaag ah noo ogolayn Eritrea, waxaanan ku quus qaadanay sida ay ula dhaqantay xukuumada Eritrea Jabhadihii naga soo horeeyey sida ONLF, oo ay qaybisay gudaheed, qaar badan oo ka mid ah Jabhada ONLF ay u dishay siyaabo kala gadisan, qaar badana ay xidhxidhay”. Dhibaatada haysata ururka ONLF, iyo kuwo kale oo badan waxaa abuurtay xukuumada Eritrea, aniga iyo shariif xasan kolkii aan aragnay siyaasad khariban ee Eritrea ayaanu ka soo baxsanay.
Waxaa arintaa markhaati ah taageerayaalka ururka ONLF iyo xubnihii golaha dhexe ee raacay fikirka khaldan ee Eritrea, ee ay iyadu ku danaysanayso, iyada oo damacday in ay jabhaduhu u shaqeeyaan sida askarta eritrea oo kale, kii diidan laga takhaluso.
Gabaygii Jiib Absame
Ogaysiis: Kal-Fadhigii OVP oo la Qaban Doono 16 October 2009